Ụgbọ ala hydrogen: kedu ihe ha bụ, njirimara, uru na ọghọm | Green Renewables
Portillo nke German | 10/11/2021 17:46 | Teknụzụ ọhụrụ
na ụgbọ ala hydrogen Ha bụ ụgbọ ala a na-ewere dị ka ihe efu. Ha na-arụ ọrụ site na cell mmanụ ụgbọala, nke hydrogen na-oxidized na-emepụta ọkụ eletrik maka nduzi. Naanị uzuoku mmiri na-ahapụ n'oge usoro a. Dabere na ihe nlereanya ahụ, otu ma ọ bụ karịa igwe eletrik na-ahụ maka mmegharị nke ụgbọ ala ahụ. A ga-ejikọta ya na batrị na cell mmanụ. A ga-emecha akụkụ a na tankị nchekwa nke na-echekwa hydrogen.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụgbọ ala hydrogen na àgwà ha.
1 Njirimara nke ụgbọ ala hydrogen
2 Uru nke ụgbọ ala hydrogen
2.1 Ọ dịghị emetọ
2.2 Ịnye mmanụ ngwa ngwa
2.3 Ị ga-ezute ebumnuche mbelata ikuku nke EU
2.4 Ndozi kacha nta
2.5 Ha anaghị eme mkpọtụ
2.6 Ị nwere ike ịdọba ụgbọala na-akwụghị ụgwọ
2.7 Ha na-edi oke okpomọkụ
3 Ọdịmma nke ụgbọ ala hydrogen
3.1 Ọnụ ahịa ịzụrụ dị elu
3.2 Ebe ole na ole iji gbanye mmanụ
3.3 Obere ụdị dị iche iche
3.4 Were ohere karịa
Njirimara nke ụgbọ ala hydrogen
Ozugbo onye ọkwọ ụgbọ ala bido ụgbọ ala, ihe mbụ ụgbọ ala kwesịrị ime bụ iji hydrogen jupụta cell mmanụ. N'ebe ahụ, ọ na-ejikọta na oxygen amịpụtara, nzacha na abịakọrọ si n'èzí site compressor. Site na njikọ a, a ga-emepụta ọkụ eletrik na mmiri.
Ihe dị mkpa bụ na a na-ebufe ike na batrị maka nchekwa. Ọ naghị abanye n'ime igwe ozugbo. A na-eme usoro a n'ụzọ dị otú a iji hụ na enwere ike mgbe niile mgbe onye ọkwọ ụgbọ ala chọrọ ya nakwa na ọ dịghị tics na-adịghị mma.
Ka ọ dị ugbu a, ọrụ ụgbọ ala nwere njirimara ndị a ga-enweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ n'ọdịnihu dị nso. Dị ka atụmatụ sitere na Spanish Hydrogen Energy Association (AeH2), ụlọ ọrụ na-atụ anya nke ahụ Ụgbọ ala 140.000 hydrogen ga-ekesa na Spain n'ime afọ 11.
Uru nke ụgbọ ala hydrogen
Ọ dịghị emetọ
Dịka anyị kọwara na mbụ, Ụgbọ ala hydrogen na-ahapụ naanị kuku mmiri. Ụdị ụgbọ ala a, nke a na-akpọ ụgbọ eletrik eletrik nke mmanụ ụgbọala hydrogen (FCEV), yiri ụgbọ eletrik n'ọtụtụ ụzọ. Site n'ịghara ịwụpụ ihe ndị na-emerụ ahụ, ị ​​ga-enyere aka chebe gburugburu ebe obibi ma belata mmetọ dị njọ nke njem ọdịnala kpatara.
Ịnye mmanụ ngwa ngwa
Ọ na-ewe naanị nkeji 3-5 iji gbanye mmanụ ụgbọ ala na hydrogen. nke yiri oge achọrọ maka mmanụ ụgbọala ma ọ bụ mmanụ dizel. N'echiche a, ụgbọ ala eletrik na-emebi emebi n'ihi na ha chọrọ opekata mpe nkeji iri atọ iji gbanye mmanụ. N'otu aka ahụ, dị ka data AeH30 si kwuo, nkezi ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala hydrogen bụ 2 euro kwa 8,5 kilomita, nke yiri ụgwọ nke onye ọkwọ ụgbọ ala diesel ma ọ bụ mmanụ ụgbọala.
Ị ga-ezute ebumnuche mbelata ikuku nke EU
Ọ bụrụ na ị nwere ụgbọ ala hydrogen, ị ga-echere (ma gbanwee) maka ebumnuche mbelata ikuku nke EU maka 2030. N'ime afọ ahụ, ihe ndị na-emetọ ihe na-esi na ya pụta. Ụgbọ ala ọhụrụ kwesịrị ịdị 35% na-erughị na 2021.
Ndozi kacha nta
Tụnyere ụgbọ ala ndị na-eji injin mgba ọkụ dị n'ime, ụgbọ ala ndị a na-arụkwa obere injin ma dịkwa mfe karị. Hydrogen dị ọcha n'ichepụta na ojiji. N'ihi nke a, ha abụrụla ezi ndị nnọchi anya nke mba ndị kachasị elu n'ụwa kwalitere. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị ihe ndabara na Germany ekenyela nde euro 140 kwa afọ maka mmepe nke ike a.
Ha anaghị eme mkpọtụ
Ụgbọ ala hydrogen dị jụụ na enweghị mmetọ dị ka ụgbọ ala eletrik ọdịnala. Mana ha karịrị ha n'akụkụ ọzọ dị oke mkpa: nnwere onwe. NANke ikpeazụ nwere ike ịga ihe dị ka kilomita 300 n'otu ụgwọ, ebe hydrogen nwere ike ịga ihe karịrị okpukpu abụọ.
Ị nwere ike ịdọba ụgbọala na-akwụghị ụgwọ
Ebe ọ bụ na a na-ewere ha dị ka ụgbọ ala dị ọcha, a na-akpọkwa ụgbọ ala ndị nwere hydrogen dị ka 'ihe efu' site na DGT, dịka ụgbọ ala eletrik. Nke a na-eweta otu uru ahụ “ụmụnna” ya na-enweta (karịsịa n’obodo ụfọdụ). N'etiti ha, Ha enweghị ihe mgbochi na ịnya ụgbọ ala, ha nwere ike ịdọba ụgbọ ala na mpaghara SER na-akwụghị ụgwọ, na ha nwere ike ịkwaga ọbụna mgbe nkwekọrịta mgbochi mmetọ nke e hibere na isi obodo ndị dị ka Madrid na Barcelona na-arụ ọrụ n'otu oge.
Ha na-edi oke okpomọkụ
Uru ọzọ nke ụdị ụgbọ ala a bụ na, n'adịghị ka ụgbọ ala eletrik 100%, ha nwere ike iguzogide oke okpomọkụ. Ọrụ ụgbọ ala ahụ agbanwebeghị nke ukwuu na oke ya agbanwebeghị nke ukwuu, dịka ụgbọ ala eletrik.
Ọdịmma nke ụgbọ ala hydrogen
Ọnụ ahịa ịzụrụ dị elu
Ndị na-emepụta ụgbọ ala na-eji hydrogen arụsi ọrụ ike iji wedata ọnụ ahịa, ma ha ka dị elu karịa ụgbọ ala eletrik. N'ezie, nke a dabere na onye nrụpụta ọ bụla na ụdị ọ bụla. N'agbanyeghị nke a, ụdị ndị amalitela ịkụ nzọ na nhọrọ a na-emesi obi ike na ụgbọ ala ndị nwere hydrogen ga-adị ọnụ ala n'ime afọ ole na ole. Ugbu a, ọ bụ akaụntụ na-echere. Ihe e ji mara mmanụ ụgbọala na tankị hydrogen na Ha aghaghị iguzogide nrụgide dị elu bụ isi ihe kpatara ọnụ ahịa nrụpụta ha dị elu.
Ebe ole na ole iji gbanye mmanụ
Ka ọ dị ugbu a, netwọkụ ọdụ ụgbọ mmiri hydrogen bụ ihe nzuzu n'ezie. Na Spen, a pụrụ iji aka gụọ "ndị na-emepụta ọkụ eletrik" (nke a na-akpọkarị). Dị ka National Hydrogen Energy Center si kwuo, ọ bụ naanị isii dị ugbu a. Ha dị na Seville, Puertollano, Albacete, Zaragoza, Huesca na Barbastro. Mba ndị ọzọ amalitela ịkụ nzọ nke ọma na nhọrọ a.
Obere ụdị dị iche iche
Mgbe ị na-ahọrọ ụdị ike hydrogen, ọ dịghị ọtụtụ nhọrọ. Nsogbu dị na nkà na ụzụ a taa bụ na ndị na-emepụta ihe anaghị anwa anwa imepụta ụdị nke ukwuu. N'echiche a, obere netwọk nke "hydroelectric generators" nke a kpọtụrụ aha n'elu nwere mmetụta dị mkpa. Agaghị enwe mmeghachi omume yinye. Ebe ọ bụ na ọdụ ụgbọ ala dị ole na ole na ọnụ ahịa ụgbọ ala dị elu, ihe a na-achọ ka dị ntakịrị. Ihe niile pụtara na ndị nrụpụta anaghị anwa anwa ịbanye n'ahịa nkesa nke ọma.
Were ohere karịa
Ụgbọ ala eletrik nwere nnukwu mgbagwoju anya nke teknụzụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ihe niile nke ụgbọ ala ahụ nwere (engine, njikwa njikwa na onye ntụgharị, nnyefe, mmanụ mmanụ), karịsịa oghere nke tankị hydrogen nwere, na-eme ka ụdị ndị a rụpụtara dị nnọọ ukwuu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụgbọ ala hydrogen na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Teknụzụ ọhụrụ » Ụgbọ ala hydrogen